Akụkọ Google banyere ịgagharị COVID-19: ndị Spen nyere ọzụzụ | Gam akporosis
Spaniards bụ ndị kachasị ọzụzụ na mkpochi: Google na-akwado ya site na mkpagharị ngagharị ya
Oge nke a Google ebipụtala ụfọdụ akụkọ ngagharị ụbọchị ole na ole gara aga nke ọ na-egosi etu e si dọọ ụmụ amaala mba dị iche iche ebe ọrịa coronavirus na-efe na-ada.
na Spaniards anyị na-ahụ onwe anyị dị ka ndị kasị dọọ aka ná ntị na iche iche dị ka Google na-egosi anyị na akụkọ a nakwa na ọ na-enye data a ekele maka nhazi nke ekwentị anyị. Ọ bụ ezie na ọ dị nnọọ mkparịta ụka, ọ na-egosi na anyị niile nwere ike.
1 Kedu ka ọmụmụ Google si mee
2 Etu ị si enweta data na nzuzo ha
3 Ha na-agwa anyị na ndị Spen, French na ndị Italitali kacha nwee ọzụzụ
Kedu ka ọmụmụ Google si mee
Agobọchị gara aga Google bipụtara akụkọ a na nke ahụ na-enye anyị ohere ibudata data site na mba ọ bụla iji hụ ka mba niile si nọ na mkpọrọ. Akụkọ a akpọwo ya Community Mobility Reports ọ dabere na mgbanwe na nleta na-ebe dị ka ụlọ ahịa na ogige ntụrụndụ.
Nke ahụ bụ, ọ bụ dabere na mmegharị anyị mere tupu na mgbe ọrịa ahụ na-efe. Nwere ike ịhụ na eserese nke mba dị iche iche na-anọchi anya mmegharị na-acha uhie uhie na ebe ọha na eze dị ka ndị ahụ a kpọtụrụ aha, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-emechi.
Enwere ike ịhụ data site na obodo ma site na njikọ anyị nyere gị na mbido ngalaba a ị nwere ike ibudata ya. Ọbụna ha dị oghere ọha na eze kewara site na ebe ọrụ, ebe obibi, ogige ntụrụndụ, ahịa ọgwụ na nnukwu ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ okporo ígwè na ebe ntụrụndụ.
Ihe data ndị a bụ nke mbụ Google nyere ma na-ekwusi ike na ọ ga-ekekọrịta ozi ndị ọzọ n'izu ndị na-esonụ. Ọ na-adịghị na-enye onye data na ozi ndị mmadụ nyere dị ka a dum na-ẹka na na pụrụ ịbụ bara ezigbo uru n’oge ndị a na-efe efe site na COVID-19.
Etu ị si enweta data na nzuzo ha
Akụkọ ndị a ka Google mere site na ozi sitere na mpịakọta data na-enweghị aha awa niile ndị ọrụ nwere ọnọdụ akụkọ ihe mere ka ọrụ. Ntọala nke dị na ekwentị anyị na-arụ ọrụ na ndabara, mana na ọtụtụ n'ime anyị na-eji ike iji ụfọdụ ọrụ metụtara Google dịka akụkọ ihe mere eme nke Google Maps.
N'ezie google na-ewere nzuzo dị oke mkpa na ọ nweghị nke data a nwere ụdị njirimara ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị enweghị aha. Enweghị ozi gbasara onwe ya jikọtara na ha dịka ọnọdụ onye ọ bụla, kọntaktị ma ọ bụ mmegharị.
Google jiri teknụzụ 'anonymization' ya eji ya na ngwaahịa ndi ozo iji dobe data ha na nzuzo. Ọ gụnyere "nzuzo nzuzo" ma ọ bụ ọrụ maka ịgbakwunye "mkpọtụ amamịghe" na mpịakọta data iji gbochie njirimara nke onye ọ bụla.
A ghaghi iguta akuko ndia ga-adị n'ịntanetị maka oge ọnọdụ mkpu ahụ na iji ya eme ihe siri ike dika uru bara uru. Mgbe ahụ, ọ ga-ehichapụ ha. I nwekwara ike ihichapụ onwe gị akụkọ ihe mere eme gị ma gbanyụọ ya.
Ha na-agwa anyị na ndị Spen, French na ndị Italitali kacha nwee ọzụzụ
Ihe eserese na-egosi na oji na-egosi anyị ọtụtụ mba na oge oghere kewara tupu na mgbe oti mkpu. Nke ahụ bụ, ụbọchị gara aga nke Machị 8 mgbe mkpokọta na mkpochi malitere. Na mba ọ bụla, eburu ya n'oge na-adịghị anya, mana ị nwere ike ịhụ etu ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ siri meghachi omume n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na usoro ekwuputara.
Spain, France na aretali bụ ndị kachasị ọzụzụ jiri uda niile na-acha akwụkwọ ndụ nke na-egosi otu esi egbochi nkwụsị. Ọ bụ ezie na enwere ndị ọzọ, dị ka UK, ndị werela nwayọ nwayọ ma na-egbu oge site na itinye onwe ha kpamkpam n'ụlọ ha.
Fọdụ data na-akwado nke ahụ na mba anyi ka anyi karia karịa ka anyị chere na nke ahụ na-egosi etu mba ndị ọzọ siri were ya. Anyị ga-ahụ nsonaazụ anyị na postiori mgbe ọnwa ụfọdụ gafere ma anyị na-achịkọta data.
Site n'ụzọ, enwere mba na ọ bụ ajụjụ na nke a bụ South Korea dịka i si hụ na eserese ahụ. Eziokwu ahụ bụ na ndị ya nọ na mbara ọha bụ n'ihi na ha maara etu esi achịkwa ọrịa a n'oge ahụ ma ugbu a ha na-anwale mmadụ niile site n'oge ruo n'oge na ha niile na-ekpuchi ihe mkpuchi. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, enweghị usoro iwu siri ike maka ndị mmadụ ịnọdụ n’ụlọ dịka a ga-asị na ọ na-eme na mba ndị ọzọ.
Ndị mmadụ amaghị Akụkọ Mbugharị Google maka Coronavirus nke ahụ tinyere mgbalị ọtụtụ n'ime anyị na-eme ịnọ n'ụlọ, ma si otú a na-alụ ọgụ ka nro a gafere ngwa ngwa. Ka anyị gaa n'ihu #todosencasa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Spaniards bụ ndị kachasị ọzụzụ na mkpochi: Google na-akwado ya site na mkpagharị ngagharị ya
Google Maps na-eme ka ọ dị mfe ịtụ nri na ntanetị ugbu a anyị niile bụ ụlọ, mana anyị na-efu ihe dị ezigbo mkpa
Etu esi agụ akwụkwọ akụkọ dị n'ịntanetị, akwụkwọ akụkọ kachasị amasị gị n'otu ebe !!